सरकारलाई राजदूतहरूको सुझाव: हजारौं नेपाली स्वदेश फर्कन तयार छन्, उडान संख्या बढाऊ :: Setopati
विभिन्न देशमा रहेका नेपाली राजदूतहरुले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण अलपत्र नेपाली नागरिकहरुको उद्धारका लागि नियमित उडान संख्या बढाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
कोरोना संक्रमणका कारण उडान बन्द हुँदा नेपाल आउन नपाएका, रोजगारी गुमाएका र भिसा अवधि सकिएका हजारौँ नेपालीहरु फर्किन तयार रहेकाले उडानको संख्या बढाउनुपर्ने सुझाव राजदूतहरुको छ।
मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले ११ हजार बढी नेपाली श्रमिक स्वदेश फर्किएपनि अझै करिब ८ हजार फर्किने तयारीमा रहेको बताए। स्वदेश फर्किन नाम दर्ता गराएका बाहेक हरेक दिन ३ सय नेपालीहरुको भिसा अवधि सकिने गरेको उनले बताए।
दशैं तिहारको समय नजिकिँदै गर्दा चाप बढ्न सक्ने भएकाले एक हप्तामा १६ वटा नियमित उडान आवश्यक पर्ने उनको भनाई छ। उनले कल्याणकारी कोषबाट उद्धार गर्ने नीति सरकारले लिएपनि व्यवहारिक हुन नसकेको बताए। अव्यवहारिक निर्देशिकाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरु घर फर्किन नपाएको उनले बताए।
ओमानका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकालले स्वदेश फर्किन चाहने नेपालीहरुको संख्या धेरै नभएपनि समस्यामा परेकाहरुलाई पूर्ण रुपमा पिसिआर परीक्षण गरी पठाउने गरिएको बताइन्। करिब १४ सय जना अहिलेसम्म नेपाल फिर्ता भएको उल्लेख गर्दै उनले पिसिआर रिपोर्ट नेगेटिभ भएकाहरुलाई स्वदेश फर्काउने गरिएको बताइन्।
कुबेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गा प्रसाद भण्डारीले कुवेतमा ७० हजार कामदार रहेकोमा कोभिडका कारण ९ हजार २ सय बढीले स्वदेश फर्किनका लागि नाम दर्ता गराएको बताए। अहिलेसम्म करिब ५४ सय जना नेपाली स्वदेश फर्किको उनले बताए।
कतारका लागि नेपाली राजदूत डा‍. नारदनाथ भारद्वाजले कतारमा सीप नभएका अदक्ष कामदारहरुले समस्या भोगिरहेको बताए। उनले कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकहरुलाई तत्काल उद्धार गर्न नसके समस्या उत्पन्न हुन सक्ने बताए। २० हजार बढीले स्वदेश फर्किनका लागि नाम दर्ता गराएको उल्लेख गर्दै उनले हाल प्रतिदिन १ सय ५०ले बढेको बताए।
दैनिक ४ वटा उडान गर्न नसके अहिले कतारमा थन्किएका १६ हजार बढी र चाडबाडको समयमा फर्किन चाहानेहरु समेत समस्यामा पर्ने उनले बताए। साउदी अरेबियाका लागि नेपाली राजदूत डा. महेन्द्र प्रसाद सिंह राजपुतले २८ हजार बढीले स्वदेश फर्किन निवेदन दिएपनि १० हजारलाई मात्रै पठाउन सकिएको बताए।
उडानका लागि नेपालका सम्बन्धित अधिकारीहरुले आवश्यक समन्वय नगर्दा समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताए। स्वदेश फर्किन विमानस्थल पुगेका नागरिकहरुलाई अन्तिम समयमा आएर काठमाडौंबाट उडान स्थगित भएको भन्ने जानकारी आउँदा समस्या हुने गरेको उनले बताए।
बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले कोभिड—१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरको निर्णअनुसार चार्टर्ड उडान मार्फत नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्काउने गरिएको बताए। अहिलेसम्म ११ सयलाई स्वदेश फर्काइएको उल्लेख गर्दै उनले दशैको समयमा चाप बढ्न सक्ने बताए।
राजदूतहरुले इलिगल रुपमा काम गरेकाहरु बढी समस्यामा पर्ने गरेको बताएका छन्। विशेष गरी घरेलु कामदारहरुलाई आफू जाने देशको प्रचलित कानून र भाषाको ज्ञान नहुँदा पनि समस्या हुने गरेको उनीहरुको भनाइ छ।